I Phepheng/Draaihoek dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi South any Botsoana. Ny isam-poniny dia 994. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Phihitshwane dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 682. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Phuduhudu dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi North any Botsoana. Ny isam-poniny dia 482. Ny laharam-pokontaniny dia 25. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Pilane Station dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 795. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -24.45 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.133333.
I Pilikwe dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 282. Ny laharam-pokontaniny dia 10. Ny laharam-pehintaniny dia -22.799043 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.193756.
I Pitsana-Potokwe dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 816. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Pitsane Siding dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 3 654. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Pitseng dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 074. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Pitshane Molopo dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 945. Ny laharam-pokontaniny dia 8. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Pole dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 288. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -20.609731 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.580174.
I Poloka dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 743. Ny laharam-pokontaniny dia 11. Ny laharam-pehintaniny dia -23.597814 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.285104.
I Qabo dia tanàna iray ao aminny distrikani Ghanzi any Botsoana. Ny isam-poniny dia 762. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Qangwa dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 683. Ny laharam-pokontaniny dia 17. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Radisele dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 985. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia -22.802018 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.998044.
I Rakhuna dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 355. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -25.55898 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.591776.
I Ralekgetho dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 430. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -24.833402 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.063961.
I Ramaphatle dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 719. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Ramatlabama dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 328. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia -25.635287 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.550921.
I Ramokgonami dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 4 486. Ny laharam-pokontaniny dia 10. Ny laharam-pehintaniny dia -22.864501 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.423912.
I Ramokgwebana dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 548. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Ramonaka dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 573. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Ramotlabaki dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 370. Ny laharam-pokontaniny dia 13. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Ramotswa dia tanàna iray ao aminny distrikani South East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 28 952. Ny laharam-pokontaniny dia 40. Ny laharam-pehintaniny dia -24.871579 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.869893.
I Ramotswa station/Taung dia tanàna iray ao aminny distrikani South East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 4 250. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -24.97799 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.678247.
I Ranaka dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 409. Ny laharam-pokontaniny dia 14. Ny laharam-pehintaniny dia -24.910812 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.471051.
I Rapples Pan dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi South any Botsoana. Ny isam-poniny dia 283. Ny laharam-pokontaniny dia 5. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Rasesa dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 3 933. Ny laharam-pokontaniny dia 11. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Ratholo dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 236. Ny laharam-pokontaniny dia 15. Ny laharam-pehintaniny dia -22.724538 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.571989.
I Robelela dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Bobonong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 829. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Salajwe dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 440. Ny laharam-pokontaniny dia 35. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Samochema dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 149. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Sankuyo dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 410. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Satau dia tanàna iray ao aminny distrikani Chobe any Botsoana. Ny isam-poniny dia 605. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Sebina dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 3 276. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia -20.866667 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.25.
I Sechele dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 530. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -20.759059 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.360667.
I Sedibeng dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 708. Ny laharam-pokontaniny dia 2. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Sefhare dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 4 602. Ny laharam-pokontaniny dia 19. Ny laharam-pehintaniny dia -23.029045 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.469057.
I Sefophe dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Bobonong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 6 062. Ny laharam-pokontaniny dia 36. Ny laharam-pehintaniny dia -22.183333 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.966667.
I Segwagwa dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 056. Ny laharam-pokontaniny dia 9. Ny laharam-pehintaniny dia -25.189411 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.173197.
I Seherelela dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 723. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia -24.424905 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.558982.
I Sehithwa dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 748. Ny laharam-pokontaniny dia 73. Ny laharam-pehintaniny dia -20.466667 ary ny laharan-jarahasiny dia 22.716667.
I Sehunou dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 049. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Sekakangwe dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 946. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Sekhutlane dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 871. Ny laharam-pokontaniny dia 13. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Sekoma dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 190. Ny laharam-pokontaniny dia 30. Ny laharam-pehintaniny dia -24.515323 ary ny laharan-jarahasiny dia 23.928406.
I Sekondomboro dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 629. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Seleka dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 157. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -22.880767 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.528887.
I Selokolela dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 610. Ny laharam-pokontaniny dia 13. Ny laharam-pehintaniny dia -24.949097 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.111012.
I Semane dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 549. Ny laharam-pokontaniny dia 23. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Semboyo dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 412. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.